उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्रीले भने : कालापानी भारतकै हो, भारतकै रहन्छ-ओलीको अभि'व्यक्ति संस्कृति छैन ! -
उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्रीले भने : कालापानी भारतकै हो, भारतकै रहन्छ-ओलीको अभि’व्यक्ति संस्कृति छैन !
३ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कालापानीबाट भार’तीय फौ’ज हटाउनुपर्ने सार्व’जनिक अभि’व्यक्ति दिएपछि भारतमा पनि त’रंग आएको छ ।
भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिलाई स्थान दिएसँग भारतीयहरुमाझ पनि यो विषयले चर्चा पाउन थालेको हो ।
यसाबारे उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतले मुख खोलेका छन् ।
मुख्यमन्त्री राउतले अमर उजालासँग कुरा गर्दै कालापानी क्षेत्र भारतको हिस्सा भएको दाबी गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘जुन कुरा नेपालले भनेको छ, त्यो चि’न्ता’जनक छ । (कालापानी) भारतको हिस्सा हो र भारतकै रहन्छ ।’
यद्यपि उनले नेपाल भारतको मित्र राष्ट्र भएकाले कुनै विवाद भए वार्ता र सम्वादमार्फत हल गर्न सकिने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको अभि’व्यक्ति’लाई लिएर सोधिएको प्रश्नमा उनले ‘यस्तो किसिमले कुरा गर्ने नेपालको कार्य संस्कृति नभएको’ बताएका छन् ।
भारतले कालापानी–लिपुलेकलाई आफ्नो भूभागमा समेट्दै एकतर्फी रुपमा नक्शा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा वि’रो’ध सुरु भएको थियो । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाट कालापानी नेपाली भूमि भएकाले त्यसबाट आफ्नो सेना फिर्ता लैजान भारतलाई आग्रह गरेका थिए ।
एजेन्सी । अब हामीले केही नयाँ काम सुरु गछौँ, तब कयौँ स’मस्या आउने गर्दछन्। कुनै व्यक्तिले ती स’मस्याबाट हैरानी भएर कामलाई अधुरै छोडिदिन्छन् भने कुनै व्यक्ति ती समस्यासँग जुधेर लगातार काममा लागिरहन्छन्। तर कुनै बेला यस्तो समय आउछ स’मस्या घ’टनुको साटो अझ बढ्दै जान्छ।
यो स’मस्या हाम्रो समयको साथसाथै हाबी हुँदै जान्छ। र हामी कमजोर बन्दै जान्छौँ। स’मस्याले हाम्रीलाई तनावमा पार्नुका साथै तर्क शक्तिमा समेत क’मजोर बनाउदै लैजान्छ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुलाई भनेः म कठोर कदम चाल्दैछु, तपाईंहरु मतिर हो कि अरुतिर हो…
अन्तर्वार्ता : सन् २०२२ मा विकासशील राष्ट्रको सूचीमा जाने लक्ष्यको निकटमा छौँ ः…